Usoro sitere n'aka 'Shining' nyere iwu maka HBO Max
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Usoro sitere n'aka 'Shining' nyere iwu maka HBO Max
by Waylon Jọdan April 16, 2020
by Waylon Jọdan April 16, 2020 897 echiche
HBO na-ewepụ nkwụsị niile maka ọdịnaya ọhụụ maka HBO Max na-abịa, usoro ikpo okwu edobere iji bido na May 2020, na dị ka iche iche, nke ga-agụnye usoro ohuru nke dabere na The mbadamba na-egbuke akpọ aha Nlele anya.
A ga-emepụta ihe ngosi ahụ na JJ Abrams na ụlọ ọrụ Bad Robot Productions ya.
Nlele anya ga-enyocha akụkọ ndị a na-akọghị banyere ụlọ nkwari akụ Overlook dị ka nke Stephen King dere na akwụkwọ 1977 ya, The mbadamba na-egbuke. Akwụkwọ akụkọ ahụ hibere isi na ezinụlọ ndị werela ọrụ ilekọta onye nwe họtel ahụ n'oge oge oyi. Ma, ha mechara chọpụta na họtel ahụ dị mgbe, mgbe enweghị ọrụ.
Ọ bụ, ikekwe, otu n'ime ọrụ ndị ama ama nke King na ọrụ nke kpatara ọtụtụ ndị ochie. Ọ dabere na akwụkwọ akụkọ ahụ na akụkọ ihe mere eme ma kwukwa na ọ na-ezute Stanley Hotel na obodo nta ugwu Estes Park, Colorado.
Nke a bụ naanị otu n'ime usoro Abrams na Bad Robot na-ewepụta maka ọrụ nkwanye. Ha na-arụ ọrụ na Ikpe ziri ezi Leak Ọchịchịrị, na Duster, ihe nkiri ejije mbụ.
E debere HBO Max maka mbido ọnwa na-abịa yana nnukwu katalọgụ nke ihe ngosi na ihe nkiri yana ọdịnaya izizi maka $ 14.99 kwa ọnwa, otu ọnụahịa dị ka ndenye HBO Go ugbu a. Ndị debanyere aha bụ ndị debanyere aha maka HBO Go, ga-enwe ike ịkwalite Max na mbido ụbọchị.
Nwere obi ụtọ na atụmanya nke usoro isiokwu a? Ka anyị mara ihe ị na-eche na-aza ajụjụ!